Somaliland Guardian: CODKAAGA KU CIIL BAX...DHAMMAAD IYO DARDAARAN
CODKAAGA KU CIIL BAX...DHAMMAAD IYO DARDAARAN
Waxay ahayd shan sano iyo dheeraad kolkii taxanaha CODKAAGU YAANU CADOW KUGU NOQON aan bilaabay. Waxay ahyd digniin muhiim ah oo ay ahayd in la hubsado si loo helo barlamaan tayo ah oo meel mariya masiirka ummadda, la xisaabtama xukuumadda. Waxa dhacday in reero loo soo xulay laguna doortay. Waxa dhacday in colkii UDUB halkay xukuumadda ka toosin lahaayeen noqdeen qaar gar iyo gardaraba ku raaca, oo ilooba muhimka ay leedaha la xisaabtanku.
Taasi waxay dhaxalsiisay in golaha Wakiiladu noqdo gole doodo keliya ooyna waxba ka soo bixin, xukuumaddina waxay noqotay gardarro garab og. Waxa soo raacay in xilka ay qabteen mas'uuliin Wasiiro leh, Aagaasimayaal leh, Madax boolis leh, Madax Ciidan leh oo iyana loola dhaqmo si ay u adeegaan xukuumadda ooy marar badan baal maraa xilka loo dhaarshay, iyagoo mas'uuliyaddii qaranku ku soo uruurtay difaaca xaq-darro ee Madaxweyne Riyaale. Awooddii oo dhammi waxay ku uruurtay gacanta Riyaale. Isagoon weli dibinta furin ayey kolka farto dhaqaaqdo wasiiradu kor u boodaan oo midba kan kale ka horarsadaa raaligelin aan weli waxay tahay ayna dhab u fahmin.
Dalku waxuu noqday guri qof leeyahay, qabnigii ummaddu sidoo kale. Haddaba kolka xaal halkaas maray ayaan bilaabay taxan kale oo ugu baaqay intii Codkoodu Cadow Ku Noqday inay guntadaan oo waxaan bilaabay CODKAAGA KU CIIL BAX...kaas oon halkan ku soo afmeeraayo manta.
Uma baahnid xusuus fog, oo waxa kaaga filan duruufaha iyo dhacdooyinka ayaamhan taagan. Maxay arkeen tiirarka UDUB ee ka daadanaa markabka sii degaaya. Waa astaan iyo saadaal wacan oo waa dhammaadkii mugda muddada dheer inagu habsaday Insha Allah.
Ku xusuuso ..Dhiilkeyga wax yar ayaa dhimman ee koodu wuu madhanyahay..macnahu waa codkaaga waxaan ku iibsanayaa lacagaada. Waxaan kugu karbaashayaa ushaada, waxaan kaa dhigi nin haraaddan oo ceelkiisa aan keli dhaansanaayo, waxaan haystaa rag gacamaha aan u caseeyey aan cid kale aqoon anigi mooyee. Mey noqon oo colkii uu gacamaha u caseeyey intii dareen ku sii hadhay wey garatay inuu markabku degaayo. Waxay la noqotay ka boodoo illeyn naftu orod ayey kugu aamintaa ee yaan laguuga dul iman. Waa Wasiiro cararaaya, waa Xildhibaano Wakiilo oo cararaaya, Waa Xildhibaano Degaan oo cararaaya, Waa tiirarkii xisbiga UDUB oo dhalin leh, oo haween leh, oo waayeel leh, waa salaadiin iyo cuqaal.
Horaan u idhi Yaa ku hadhay UDUB. Maan filayn in ilaa maalinta doorashada UDUB soo dindimi doonto waxaan filaayey in ay leedhay rag iyo dumar ku adag oo tiro badan, wey jiraan weyse yaryihiin oo waa tan weli soo yaaceysa.
Xusuuso xukuumadda 55ka dhaaftay, xusuuso tayadooda, xusuuso qoraal la,aanta shirkooda, xusuuso ciidanka iyo booliska derejo ka maqantay, mushahar aan helin, xusuuso lacagta qiima jibtay oo dib u noqo oo eeg inta uu joogay koobka shaahu kolkuu xilka la wareegay iyo intuu manta maraayo, xusuuso Sool iyo Sanaag bari iyo inta lacag loo uruuriyey iyo halkay martay.Xusuuso biriij keliya ee Hargeysa lacagtii laga uruuriyey ciyaalo iskuulka ilaa tujaarta iyo halkay martay.
Diid UDUB OO KU DIID ARRIMAHAN:
DIID DAACAD LA'AANTA
DIID DAROJO L'AANTA
DIID DIRAA DIREYNTA
DIID DUURJOOGTA LA GUMAADAY
DIID DARIIQ LA'AANTA
DIID DARYEEL LA'AANTA
DIID DAMQASHO LA'AANTA
DIID XAALKA DEKEDDA BERBERA
DIID BALAN BEEN AH
DIID LAALUUSH IYO LA-XISAABTAN LA'AAN
Waa ayaan xornimo mid taariikhi ah oo ah ayaantii gumeysigii caddaa ka huleelay dalkeena, waa sharaf kale oo loo huwiyey ayaantaas 26 Juun 2010 waa maalinta masiirka ummadda aad u gurman karto, aad badbaadin karto, aad intaas oo diidmo mudan ee dusha ku qoran aad ka xorreyn karto dalka, Waa mustaqbalkii ummadda, waa adigoo u hura codkaaga, oo ku ciil baxa codkaaga. Sii KULMIYE oo noqo ruux ku dhiirada isbedelka dhabta ah. Ha khasaarin oo ha siin cid aan soo baxayn iyo meel aan jirin. Ha ka seexan oo yaan aamuskaagu inagu keenin UDUB. Ha noqon nin gacantiisa isku gawraca. Isagu gee awoodaada inaad hesho cod buuxa oo isbedel dhalin kara.
Posted by Ahmed Hassan Arwo at 12:24 PM
Dr Purva Pius December 6, 2016 at 12:00 AM